Etu esi hazie agwa n’ime Anyị | Gam akporosis
N'etiti Anyị na-enweta nnukwu ewu ewu n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ ndị na-akpọ aha a ọtụtụ ndị ama ama Youtubers zụlitere ugbu a. Na egwuregwu vidio a ị nwere ike ịnọ n'akụkụ abụọ, na nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị aghụghọ, enwere ngụkọta nke abụọ na egwuregwu ọ bụla.
Fallda n'ime otu ma ọ bụ n'akụkụ nke ọzọ gafere site na mkpebi nke kọmputa ahụ, ọ bụ ezie na okwu banyere idozi agwa nke Otu Anyi dapụ n’aka anyị. Nwere ike igwu egwu na palette ọ nwere ozugbo ị ruru na nhọrọ ndị dịgasị iche iche ma anyị nwere ya niile na mkpịsị aka anyị.
Etu esi hazie agwa n'etiti anyị
Hazie agwa dị n'etiti Anyị Ọ bụ ihe a ga-eme na-erughị otu nkeji, yabụ itinye ụda ụcha dị iche na nke ndị asọmpi ahụ nwere ike bụrụ mkpebi na egwuregwu ọ bụla. Jiri ya gwurie egwu, n'ihi na ọ bụrụ na ha na-ahụ gị otu ụda mgbe niile, ha nwere ike lekwasị gị anya ma chụpụ gị na egwuregwu ahụ.
Iji hazie agwa gị n'etiti anyị i nwere ike ime ya dị ka ndị a:
Mepee n'etiti Anyị ngwa
Ugbu a pịa Online ozugbo ị nọ na menu nhọrọ
Mepụta egwuregwu, ma ọ bụ nkeonwe ma ọ bụ sonye n'ọnụ ụlọ nke egwuregwu
N'ebe a, ị ga-enwe ogwe aka ruru agba 12, họrọ otu n'ime ha ma chekwaa mgbanwe ndị ahụ
Ọ dị mfe ịgbanwe agba nke agwaNwere ike ịme ya tupu egwuregwu, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-egwuri egwu mgbe mgbe na-eji naanị otu agba, ị ga-enwe ohere ịnwụde gị ngwa ngwa. Usoro kachasị mma na nke a bụ iyi otu oge ọ bụla iji duhie ndị na-emegide anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị daa n'akụkụ nke ndị nduhie.
N'etiti Anyị ugbua karịrị 100 nde nbudata na gam akporo na ọ na-e nnọọ ebudatara na PC, a n'elu ikpo okwu nke ọ bụkwa ike igwu egwu. N'etiti Anyị bụ aha na-eri ahụ iji soro ndị ezinụlọ na ndị enyi egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Etu esi hazie agwa n’ime N’etiti anyi
Etu esi eji Google Predita Piano na ekwentị gị